စင်္ကာပူတွင်အလုပ်လုပ်ကြသော မိန်းကလေးတို့၏ အန္တရာယ် ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 11:29 AM | No မှတ်ချက် |
May Mon Kyaw and Than Htut shared Chit Coco's photo.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်ခံရမှု ပပျောက်ရေးအတွက် လမ်းလျှောက်ပွဲ လုပ်သည့် သတင်း ကို ဖတ်ရင်း စင်္ကာပ
ူမှာ အလုပ်လုပ်နေသည့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား များနှင့် ပတ်သက်သော စစ်တမ်း တစ်ခု အကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် သတင်းတစ်ပုဒ်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ကာလအတွင်း လူ ၅၀၀ ခန့်ကို မေးမြန်းကောက်ယူခဲ့သည့် စစ်တမ်းအရ တစ်ဝက်လောက် ဟာ အလုပ်ခွင် အတွင်း ကာယ အိနြေ္ဒ ပျက်ပြားအောင် နှောက် ယှက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြ ခဲ့သည်။ အဆိုပါ လူ ၅၀၀ အတွင်းမှ ၅၄.၄ % ဟာ အဆိုပါ နှောက်ယှက်မှု မျိုးကို ကိုယ်တိုင် ခံစားခဲ့ရပြီး ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ကတော့ တစ်ခြားသူတွေ ကို အဲလို နှောက်ယှက် တာကို မြင်ဖူးခဲ့ပါတယ်။ ၃၀ % ကတော့ သူတို့ ကိုယ်တိုင် အကြိမ်ကြိမ် နှောက်ယှက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပြီး၁၂ % ကတော့ မလိုက်လျော ရင် သူတို့ အလုပ်က ထွက်ရနိုင်တဲ့အထိ ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးနဲ့ နှောက်ယှက်ခံခဲ့ ရပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါ စစ်တမ်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ထိုသို့ခံရသူများတွင် အမျိုးသမီး ၇၉ % ရှိပြီး အမျိုးသားကတော့ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသတဲ့။ အကြမ်းဖက်နှောင့်ယှက်သူများဟာ တစ်ခါတစ်ရံ စင်္ကာပူမှာ နေထိုင်ပြီး အလုပ် လိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများနဲ့ အလုပ်ဝင်ကာစ အသစ်လေးများကို ပစ်မှတ် ထား နှောက်ယှက်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်များထဲမှ ၃ ခုကိုလည်း သတင်း တွင် ဖော်ပြ ခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်(၁) administrative executive တစ်ယောက်အနေဖြင့် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ် အမျိုးသမီး တစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ မန်နေဂျာရဲ့ ကိုယ်ထိ လက်ရောက် နှောင့်ယှက် မှုကို ၂ ကြိမ် ခံခဲ့ရပါတယ်။ ပထမ တစ်ကြိမ် ကတော့ သူမရဲ့နဖူးကို နမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒါဟာ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမ မတိုင်ကြားခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ သူဟာသူမကို အခန်းထဲမှာ လော့ခ် ချတယ်။ နံရံနား ကို အတင်းဖိပြီး သူမစကပ်ကို လှန်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ သူမရုန်းကန် လွတ်မြောက် ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း မှာတော့ မန်နေဂျာဟာ သူမကိုတွေ့တိုင်း ထိကိုင်ဖို့ကြိုးစား သလို သူမကလည်း လွတ်အောင် ကြိုးစားရှောင်ခဲ့ ရပါတယ်။ သူမဟာ S pass နဲ့ နေသူဖြစ်တာ တစ်ကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်စကား မကျွမ်းကျင် တာ တစ်ကြောင်းမို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မတိုင်ကြားရဲဘဲ စိတ်ညစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး သူမရဲ့ယောက်ျားက အတင်းမေး ကာမှ အဖြစ်မှန်ကို သိပြီး အလုပ် သမားဌာနကို တိုင်ကြား ခဲ့ရပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်(၂) administrative clerk တစ်ယောက်ဟာလည်း သူမ သူဌေးရဲ့ နှောက်ယှက်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူမ ကတော့ မိသားစုမှာ တစ်ဦးတည်းသော ပိုက်ဆံရှာ သူဖြစ်တာကြောင့် စီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့ ကာလမှာ အလုပ် မရမှာ စိုးတာကြောင့် ရဲကို မတိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူမရဲ့ အလုပ်ဟာ သေးငယ်ပြီး သူမသူဌေးနဲ့ သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ပူးပေါင်း လည်ပတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့ မှာတော့ သူဌေးဟာ သူမရဲ့ရင်သားနဲ့ ဒူးခေါင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူမကို မတော် မတရားတွေ ခိုင်းစေခဲ့ပါသတဲ့။ အကြိမ်တိုင်း သူမငြင်းဆန်ခဲ့ပေမယ့် ရဲကို မတိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ပထမအကြိမ် ကစလို့ တစ်နှစ်အကြာမှာတော့ သူဌေးဟာ သူမကို မဟားဒရား ကျင့်ဖို့ ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်။ သူဌေး အကြံ အဆုံးထိ မအောင်မြင်ပေမယ့် သူဌေးဟာ သူမအပေါ်မှာ ပြီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူမလည်း ရဲကို တိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်(၃) အမေရိကန် တက္ကသိုလ်တစ်ခုက ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ ဘဏ်တစ်ခုရဲ့ စင်္ကာပူ ရုံးခွဲမှာ အလုပ် လုပ်တဲ့ တရုတ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ လည်း သူမ စီနီယာ သူဌေးရဲ့ နှောက်ယှက်မှုကို ခံခဲ့ရပါ တယ်။ ပထမတော့ ပါတီပွဲ တစ်ခုမှာ ပြင်သစ် အနမ်း ပေးပါတယ်။ နောက်တော့သူမ ခါးကို ဖက်ခြင်း၊ သူမ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှု အပေါ်မှာ ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမတော့ သူမအ ထက် ကြီးကြပ်သူ တစ်ယောက်ကို ပြောပြပေမယ့် အဆိုပါ သူဌေးဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေ ရှိတာကြောင့် ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ ရဲတိုင်ရအောင်လည်း အလုပ် စာချုပ် ရှိ တာ က တစ်ကြောင်း၊ စာချုပ်မပြည့်မီ အလုပ်ထွက်ရင် လျော်ကြေးပေး ရမှာက တစ်ကြောင်းမို့ မတိုင်ရဲခဲ့ ပါ ဘူး။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ရှေ့နေတစ်ဦးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အလုပ် သမားရေးရာကို တိုင်ခဲ့ ပါတော့တယ်။ သူမလည်း သူမ သူဌေးဆီက လျော်ကြေး များရပြီး အလုပ် ထွက်ကာ အခြားနိုင်ငံ တစ်ခုမှာ ဘ၀သစ် စနေ ပါပြီ။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်များကို ကြည့်ပါက သူ့နိုင်ငံသားဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ဖြစ်စေ အလုပ်ရှင် ရဲ့ နှောင့်ယှက်မှုတွေကို နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အားလုံး သတိထားနိုင် ပါစေ။
Asiaone မှ သတင်းတစ်ခုအား တတ်နိုင်သလောက် ဘာသာပြန် ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။